Qalabka cusub ee Somaliland ma lagu dhageysan karaa wadasheekeysiga dadka? | Baligubadlemedia.com
Qalabka cusub ee Somaliland ma lagu dhageysan karaa wadasheekeysiga dadka?
Wasaaradda Isgaadhsiinta ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa sheegtay inay billaabayso baadhista halista caafimaad ee ay keeni karaan taawarada shirkadaha isgaadhsiinta. Laakiin qalabkan sidoo kale ma u sahlayaa dowladda inay dhageysato wadasheekeysiga dadka ay ku sameeyaan khadadka telefoonnada?
Durba waxaa soo baxay walaac ku aaddan in qalabka cusub ee loo adeegsanayo howlahan uu suuragalin karo in la helo codadka iyo xogta shirkadaha.
Cabdiwali Cabdillaahi Suufi, oo ah wasiirka isgaarsiinta Somaliland, ayaa BBC-da u sheegay in aysan wax awood ah u heysanin dhageysiga xogta dadweynaha.
“Qalabkan waxaa loogu talagalay la socodka hirarka, wax kale oo ka baxsan hirarkaas looma adeegsan karayo, waayo ujeeddada loo sameeyay ayaa taas ah, shuruudaha loo adeegsanayo qalabkanna waxaa ka mid ah in meel gude ah lagu hayo. Qalabku gaadhi buu saaran yahay, dibadda ayuu wareegayaa, taawarrada ayaa la hoos dhigayaa, hirarka ayaana lagula soconayaa. Annagu sharci ahaan uma heysanno awood in waxyaabaha la sheegayo aan ku dabagalno, laakiin tan aan awoodda u leenahay waa in aan la soconno adeeg bixiyaha – oo ah shirkadaha isgaadhiisnta iyo TV-yada.” Ayuu yidhi Wasiirka.
Isagoo sharraxaad dheeri ah ka sii bixinaya in qalabka lagu dhageysan karo codadka wadasheekeysiga isgaadhisiinta, marka sharci ahaanteeda laga soo tago, ayuu yidhi: “Qalabku ma dhageysan karo codad. Wuxuu sheegi karaa oo kaliya inuu hir jiro iyo inuu Signal (astaan cod) jiro, meesha uu kasoo baxayo iyo inta ay awooddiisu la egtahay.”
Maxay tahay ujeeddada loo adeegsanayo qalabka?
Saddex ujeeddo oo qalabkan loo howlgalinayo ayaa kala ah “maamulista hirarka isgaadhsiinta, in lagu xakameeyo shucaaca kasoo baxa taawarrada iyo goobaha isgaarsiinta si guud iyo waliba in lagu horumariyo cilmibaadhista tiknoolojiyadda”, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta Somaliland.
“Wasaaraddu iyadoo gudaneysa waajibaadkeeda qaran ayey awood u heleysaa inay ku maamusho ganacsatada iyo cid kasta oo adeegsata shirkadaha isgaadhsiinta – haddey tahay TV-yada iyo cid kastaba – inay u qoodneyso hirarka, kuna kormeerto kolba sida ay u adeegsanayaan. Waxaa kale oo ay noo suurtagalineysaa in aannu mar walba ogaanno sida ay hirarka dadka uga faa’iideystaan, waxaana kula socom karnaa xagga caafimaadka bulshada iyo badqabka goobaha isgaadhsiinta ee dalka ka jira.,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Horay waxa u jirtay cabasho iyo cabsi laga qabo saamaynta caafimaad darro ee ka dhalan karta hirarkaas oo dad badani ka hadlaan, qaarkoodna ay qoraallo ka sameeyeen. Hase yeeshee Wasiirka Isgaadhsiinta Somaliland ayaa sheegay in wali aan cilmi baadhis rasmi ah loo heynin dhibaatooyin caafimaad oo halis ah oo ka dhalan kara hirarkaas.
Halis caafimaad ma leeyihiin taawarrada shirkadaha isgaadhsiinta?
Taawarrada waa qalabka anteeno ahaanta loogu sudho shirkadaha isgaadhsiinta, kuwaasoo gacan ka geysta kala gudbinta hirarka iyo nadiifinta codadka.
La yaab malaha in taawar ku dhawaad 20 mitir ah oo bir ka sameysan uu ka cadheysiin karo bulshada agteeda laga dhiso, maadaama uu waxyaabo badan ka qarinayo, aragti ahaan.
Laakiin su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah in taawarka noocaas ah ee loogu talagalay isgaadhsiinta telefoonnada ama qalabka warbaahinta uu sababi karo khatar dhinaca caafimaadka ah.
31 sano sano ayaa laga joogaa markii ugu horreysay ee la billaabay isticmaalka telefoonnada gacanta lagu qaato, ilaa haddana waxaa socda baadhitaanno kala duwan oo ku saabsan caafimaad darrada laga dhaxli karo isdabamarka hirarka mowjadaha isgaadhsiintaas.
Hase yeeshee wali ma jirto caddeyn rasmi ah oo loo hayo in bulshada ay waxyeello kala kulmi karaan taawarrada laga sudho meelaha xaafadaha ah, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO).
Jaamacadda Tiknoolojiyadda ee Michigan ayaa bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay sheegtay in aan wali la dhammeystirin cilmi baadhista lagu ogaanayo saameynta taawarrada.
Laakiin waxaa hubaal ah in haddii hirarka la dhaafsiiyo heerarka loogu talagalay uu shucaacooda dhibaato abuuri karo.
Seynisyahannada Jaamacaddu waxay soo jeediyeen in qalab kor u dhisan ilaa 500 oo mitir laga sameeyo goobaha u dhow iskuullada iyo isbitaallada, kaasoo ka hortagi kara dhibaato kasta oo caafimaad, haddiiba ay suurtagal tahay inay ka dhalato qalabka taawarrada isgaadhsiinta.
Maxaa xal noqon kara?
Dadka qaar waxay ku doodaan in shirkadaha isgaadhsiinta qaarkood ay isticmaalaan qalab been abuur ah oo ay ku muujinayaan heerka hirarka ay adeegsadaan, kaasoo qarinaya xogtooda dhabta ah.
Hase ahaatee, khubarada tiknoolojiyadda ayaa wali ku howlan in si rasmi ah loo ogaado ilaa heerka ay gaadhi karto waxyeellada.
Waxaa kale oo la isku dayayaa in la ogaado saameynta dhinaca deegaanka kasoo gaadhi karta qalabka.
Xalka ugu habboon ee lasoo jeediyay ayaa ah in la sameeyo cilmi baadhis wadajir ah oo lagu qiimeeyo arrimahan.
Habka ugu wanaagsan ee loo waji karo ayaa lagu qeexay in uu yahay kan seyniska oo si aad ah diiradda loogu saaro dhinaca caafimaadka dadka.